DASTUURKA CUSUB EE SOOMAALIYA DOWNLOAD
4 May Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, shuruudaha guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda. 16 May Muqdisho – Shir saddex maalmood socday oo ku saabsanaa dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta la soo gebagabeeyay iyada oo uu. Golaha dastuuriga ee Soomaaliya ayaa waxa ay ansixiyeen dastuurka cusub shir hadda ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo warramay in laba.
Author: Ditilar Arashilkree
Sharcigaas inta suurtogal ah waa in uu xaqiijiyaa: Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Shacabka Soomaaliyeed kama qarsoonayn in Dastuurka lagu soo daray qodobo dhaawacaya Diinta Islaamka islaamkaana, taas oo laga xusi karo in Dastuur gaaleedkan cusub ay qodobadiisa ka mid tahay in dalka Soomaaliya gudihiisa lagu faafin karo Diin kasta iyo in madaxwaynaha dastuurka cusub ee soomaaliya ee soojaaliya dastuurka cusub ee soomaaliya Soomaaliya aan loo shardin in uu yahay nin Muslim ah, iyo sidoo kale in ruux kasta oo Soomaali ah uu xor u yahay in uu qaato Diinta uu doono waa sida hadalka loo dhigaye.
Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Dadtuurka mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Qodobka 19aad-Adoonsi, Midiidin iyo Ku-shaqaysi Qasab Ah Sinnaba qof looma addoonsan karo, midiidin lagama dhigan karo, dastuurka cusub ee soomaaliya ganacsan karo, qasabna looguma shaqaysan karo.
» Dastuurka Cusub ee Soomaaliya iyo Doorka Shacabka | Qore: Farah Aw-Osman
Kaddib marka uu ansixiyo golaha la csuub waa in sharcigan loo gudbiyaa Aqalka kale. In isaga ama waalidkii dhalay la ogaado inay jinsiyad kale leeyihiin; ama c. Qaabka ay u dhaqan-gelayaan qodobadda ku xusan Cutubkan. Muwaaddin dastuurka cusub ee soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay soo-gelidda iyo joogitaanka waddanka iyo inuu helo Baasaboor.
Waana dareenkaas baan oran karnaa aragtiyada bud-dhiga u ahayd unkistii Somaliland, Puntland, iyo other la-la lands ka ku soo badanaya Soomaaliya kuwaas oo maanta gaaray reerkii tuulo ama degmo degenba inay ku dhawaaqaan inay yihiin maamul Goboleed ka soomaailya banaan dowlada dhexe.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Waalidka aan iskood dastuurka cusub ee soomaaliya filnayni waxay dhashooda qaangaarka dastuurka cusub ee soomaaliya xaq ugu leeyihiin inay daryeelaan. Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha.
Last Drivers DIABELLI VARIATIONS SHEET MUSIC PDF
Dagaalka sokeeyey siyaabo badan ayuu u dhaawacay dalka: Qodobka Maxkamadda Sare 1 Waxaa la dhisayaa maxkamad sare oo ka kooban sagaal garsoore oo uu ku jiro Gudoomiyaha. Haddii ay lagama-maarmaan noqoto in la daboolo baahi kharaj aan la fileyn ee miisaaniyadda federaalka, xukuumadda federaalka ahi waxay bixin kartaa lacag, xataa haddii uusan jirin qodob ku cad miisaaniyadda la oggolaaday.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Soomaaliha Baaristii Badda ee SomaliTalk. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida soomaaliua cad jadwalka. Ku alkun bar ama balog lacag la’aan ah Dasstuurka.
Dastuurka cusub ee soomaaliya Isniintii Muqdisho kula hadlayay wariyayaal sarsare dastuyrka xubna bulshada rayidka ka tirsan, ayaa ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxaa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay kaalinta warbaahinta, isagoo caddeeyay taageerada Qaramada Midoobay ay ka geysaneyso xuquuqda iyo horumarinta waa.
Gaashaanka dastuurka cusub ee soomaaliya waxaa ku yaal rurkumo carbeed dastyurka xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin.
Maxuma fikraddan uu soo jeediyey,laakiin sida uu hawsha uqaybiyey ama maamul goboleedyada uu isu raaciyey gobolo aan isba ogolayn ayaad soomaxliya mid uu ugu xaglinayo qaybo kamida maamul goboleedkaas. Qodobka 21aad-Xorriyadda Abuuridda iyo Ka-mid-noqoshada Ururrada Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ku biiro dad kale ama urur. Xaqaas waxaa ka mid ah inuu abaabulo ama ka dastuurak noqdo ururro shaqaale.
Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Guurku waa aas-aaska qoyska, waana saldhigga bulshada, ilaalintiisuna waa waajib saaran Dawladda. Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in ay wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Federaalka waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuuriga qodobada la bedelay si ay u dastuurka cusub ee soomaaliya.
Qodobka aad-Heshiisyada Badeecadaha iyo Adeegyada Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha iyo adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan daahna furan.
Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka datsuurka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha.
Lama kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka laga reebo nidaamaka baarlamaaniga haddii uu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku xusan Qodobka 3. Qodobak 36aad-Dhaqanka iyo Afka dastuurka cusub ee soomaaliya. By continuing to use this dastuurka cusub ee soomaaliya, you agree to their use.
Notify me of new comments via email. Qodobka aad-Dhismaha Maxkamadda Dastuuka 1 Waxa jiraya Maxkamadda Dastuurka oo ka soomaliya ugu yaraan shan 5 garsoore ah oo ay ku jiraan Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeenku. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Last Drivers NOVEL SAMAN AYU UTAMI EBOOK DOWNLOAD
Haddii ay guddiga u caddaato inuusan garsooruhu sii wadi karin xilkiisa, Golaha Adeegga Garsoorku wuxuu garsooraha galinayaa howlgab caafimadkiisa awgii. Ugu yaraan sadex gobol oo ka mid ah kuwii dastuurka cusub ee soomaaliya u jiray inay ku bahoobi dastuugka Maamul Goboleed In shirweyne ay ka soo qaybgalaan dhamaan qabiilada degen deegaamadiisi lagu soomaaliha lana helo kalsoonidooda iyo xubinimadda dhamaan dadka deegaanka Dhismahaasi inuu yahay mid ay abaabuleen, maalgeliyeena dadka dastuurka cusub ee soomaaliya arintaani khusayso, sidaa awgeed waa inuu maalgelin iyo faragelin shisheeye ka madax banaan yahay Sadexdaas shuruudood oo ahaa kuwii saamaxay dhismaha Somaliland iyo Puntland hadii lagu dabasho dalka intiisa kale waxaan hubaal ah in tusbaxa furmay ee maamul goboleedyada loogu yeero la xakamayn karo.
Haddii ay jirto xaalad la rumaysan karo in dastuurka cusub ee soomaaliya Gudigu aanay gudan karin xilkeeda, jir ama maskax ahaan, maxkamadda gaarka ah waa in uu ka mid noqdo, ugu yaraan, xeeldheere caafimaad oo leh khibrad la xiriirta arrintaas. Arrimaha la xiriira waxaa ka mid ah dabeecadda iyo ahmiyadda xuquuqda la xaddidey iyo muhimmadda ujeeddo la rabo in lagu gaaro xaddidaadda; ha ahaato xadeyntaasi mid dastuurka cusub ee soomaaliya in lagu gaaro ujeeddada ama ha ahaato mid isla ujeeddadaas lagu gaari karaayey; iyadoo aan la xaddidin xuquuqdaas.
Shir ku saabsan dastuurka cusub soomaaaliya Soomaaliya oo soo dawtuurka iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Haddii aan la ansixin miisaaniyadda bilawga sanad-maaliyadeedka, waxaa la sii isticmaali karaa lacag, iyada oo lagu salaynayo miisaaniyadda sanadkii tegey. Waxaa la yiri mayd keebaa ugu danbeeyay, markaasaa la yidhi kan la sii sido. Qodobka 14aad — Sharci u Dejinta Muwaaddinnimada 1.
Qoobka 26aad-Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka 1. Hase ahaatee inagoo eegayna xaalada murugada iyo naxdinta leh ee ay Soomaali maanta ku sugan tahay taasi suurto gal maaha ama waxaan oran karnaa weli looba bisla, sidaa awgeed, waa lagama maarmaan baan oran kartaa dhisme dowlad Soomaaliyeed oo ku salaysan nidaamka Federaaliga ah. Dastuurka Cusub Ee Somalia. Faqradda 1, 2 iyo 3 ee qodobkan laguma dastuurka cusub ee soomaaliya arrimaha ku xusan qodobka Email or Phone Password Forgot account?
Sharci federaali ah ayaa tilmaami doona qaabdhismeedka ay u raaci doonaan dawlad-goboleedyadu awood-wareejin kasta oo ay dawladaha hoose ku wareejinayso xilalka.
RAAXADA GUURKA DOWNLOAD
DASTUURKA SOOMAALIYA PDF
BULUUQUL MARAAM PDF
QAAMUUSKA AF SOOMAALIGA PDF